राष्ट्रपति भण्डारीको दसैं फोटो विवादमा, आमाभन्दा माथि ‘पद’ ! – Satyapati
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विजयादशमीको साइतको टिका र जमरा आफ्नी आमाका हातबाट लगाएको फोटो राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजानिक गर्यो । टिकाको फोटो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अरु नेताहरुको पनि सार्वजानिक भएका छन् तर राष्ट्रपतिको फोटो भने विवादमा परेको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ यान्सीका दशैंको टिकाका तस्वीरहरु चर्चामा आएका छन् । विवादकर्ताहरुले राष्ट्रपति पदले टिका लगाएको हो कि राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले मान्यजनको हिसावले आफ्नी आमासँग टिका लगाएको हो ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
विजयादशमीकै दिन अपरान्हदेखि सामाजिक सञ्जाल तताएको सो फोटो झट्ट हेर्दा सामान्य देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मान्यजनका हिसावले आफ्नै आमासँग दशैंको साइतको टिका लगाएकी छिन् । तर, टीका लगाउँदा राष्ट्रपति सोफमा बसेकी छन् भने उनकी बृद्ध माता उभिएकी छन् । सोफामा बसेकी राष्ट्रपति छोरीलाई आमाले उभिएर टीका, जमरा लगाइदिँदै गरेको तस्वीरमा देखिन्छ ।
हो, यही तस्वीर विवादमा परेको हो । केही समयअघिमात्र आफ्नी आमा गुमाएका नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले आफ्नो ट्वीटरमा यो फोटो शेयर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन् । र, उनको स्वरमा स्वर मिलाएर राष्ट्रपतिले आफ्नी आमाका अगाडि पनि पावरको पोज देखाएको भन्दै विरोध गर्नेहरुको ठूलो ताँती देखिएको छ । नेता गुरुङले आमा हुनेहरुले आमालाई यसरी उभ्याएर (राष्ट्रपतिले जसरी) टिका लगाउनु १०० प्रतिशत गलत भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘जन्म दिने आमा भगवान हुन् । आमा हुनेहरुले आमालाई यसरी उभ्याएर टिका लगाउनु १०० प्रतिशत गलत हो । आमाभन्दा माथि ‘पद’ कहिल्यै हुँदैन । कसैले यस्तो कहिल्यै नगरोस् ।’ कांग्रेस नेता गुरुङले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो कुरा उठाएको भनेर आलोचना गर्नेहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै देखिएका छन् । टिका थाप्नेले बस्ने र लगाइदिनेले उठेर लगाइदिने चलन हो यो कुरा नबुझेर उनले आलोचना गरेको भन्दै गुरुङलाई सञ्जालमा गाली पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी हिन्दू धर्माबलम्बी भएर पनि माताको सम्मान गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको छ । उता हिन्दू धर्मावलम्बी नभए पनि नेपालका बहुसंख्यक हिन्दूहरुको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै दशैंमा टिका र जमरा लगाई चाड मनाएकोमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी र चीनकी राजदूत यान्सीको प्रसंसा पनि सामाजिक सञ्जालमा हिजो दिनभर निकै भएको पाइएको छ ।
जन्म दिने आमा भगवान हुन्।
आमा हुनेहरुले आमालाई यसरी उभ्याएर टिका लगाउनु १००% गलत हो।
आमा भन्दा माथि "पद" कहिल्यै हुँदैन।
कसैले यस्तो कहिल्यै नगोरोस्। pic.twitter.com/Unu9vJQhdW
— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) October 15, 2021
नेपालगन्जमा सुरु भयो ‘लागुऔषध दुर्व्यसन निस्तेज महाअभियान’
दुई सय विद्यार्थी एउटै कोठामा बसेर पढ्न बाध्य
‘अनलाइन इन्स्योरेन्स सेवा’ सुरु गर्दै एनएमबि बैंक